Tondradrano, Pisco, ary Fampianarana Maimaimpoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2017 8:21 GMT
Nahitàna tondradrano sy fihotsahan'ny tany tao amin'ny faritra tsara tarehin'i Chanchamayo, ao afovoan'ny àlan'ny firenena tamin'ny roa herinandro lasa teo. Na nanao tatitra im-betsaka momba an'io zava-niseho io aza ny media, dia toa tsy liana tamin'io lohahevitra io mihitsy ny bilaogera. Na nisy aza izany, dia azo inoana ihany hoe mety nanoratra mikasika izany izy ireo fa izaho no tsy nahita ireo lahatsoratra, afatsy ilay natao ho an'i Peru Llacta: “Lesona tsy hay“, izay mampiseho ny tsy fahampian'ny fahaizantsika amitsinjo lavitra hatrany am-boalohany sy ny vokatry ny fandanindaniam-poana ny loharanon-karena. Avy any Etazonia, nanoratra ho an'ireo mpamaky teny anglisy i Peruanista tao anatin'ilay lahatsoratra hoe “Ny Tondradranon'i Pero: Ahoana no ahafahantsika manampy azy ireo?:”
Nampiditra sarintany, horonantsary, ary rohy maro ahafahana miditra aminà tranonkala miara-miasa amin'ireo niharam-boina ny Peruanista. Nilaza ny fomba fijeriny ihany koa ny Imaginariums avy any Espaina mikasika ny zava-nisy tamin'ny “Fitadiavana ny isan'ireo olona maro nanjavona vokatry ny tondradrano sy fihotsahan'ny tany tao Pero.” Mahagaga ihany koa fa, nisy namorona bilaogy natokana ho an'ny biby, ohatra amin'izany i ADEA (Vondrona Miaro ny Zo sy ny Hasin'ny Biby) izay nanao antso avo Famonjena ireo biby rehetra mipetraka ao anatin'ny Ala Afovoany.
Aleo havadika ny resaka, nankalaza ny andron'ny Pisco (zava-pisotro misy alikaola vokarin'i Pero) izahay ny faran'ny herinandro lasa teo. Tao amin'ny Cinencuentro, somary niala kely ny lohahevitra nahazatra azy izy ireo ary niaraka nankalaza io andro io tamin'ny fanoratana lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Sarin'ny Anio: andro nahafinaritra fankalazana ny pisco. Koa satria tsy misy fomba hafa azo hilazana azy, afaka nisintonana lesona ny lohatenin-dahatsoratra tao amin'ny bilaogy natokana hiresahana ny Pisco : Andro natao hankalazana ny Pisco marikivy. Na izany aza, tsy azontsika adinoina ny nolazain'i Milanta tao anatin'ilay lahatsoratra hoe: Ny zavatra tsara: Ny PISCO , kanefa… . Marina fa tsara ho ankalazaina saingy aleo tsy hitarina be loatra koa.
Farany, ny iray amin'ireo lohahevitra maro tena nahasarika ireo antoko liana tamin'ny adihevitra dia ilay sosokevitra naroso hanajanonana ny fandoavana saram-pianarana eny amin'ny anjerimanontolom-panjakàna. Nahavita namintina tsara izany tao anaty lahatsoratra anankiroa i Gran Combo Club: “Fampianarana maimaimpoana” sy Fampianarana maimaimpoana tapany faha II. Voafintina ao avokoa ireo fomba fijery maro samihafa hita sy heno tany anatin'ny media isan-karazany, sy ny fanomezana rohy mankany amin'ireo bilaogera nisafidy io lohahevitra io. Tamin'izany fotoana izany, tsy nisalasala mihitsy i Pueblo Vruto nankasitraka an'io sosokevitra io araka ny hita ao amin'ny lahatsoratra nosoratany “Henjana nefa tena ilaina.” Ary farany indrindra, nanamafy izany tamin'ny fanaovana vazivazy zary tenany i La Cebolla tao anatin'ilay lahatsoratra “Ny 100% -n'ny mpianatra dia hianatra any amin'ny anjerimanontolo tsy miankina avokoa amin'ny taona 2011.” Raha tena matotra tsara io sosokevitra naroso io, dia izay vao tena hanan-kambara foana ny bilaogera, fa aleo aloha hajanontsika eto ny resaka izao.
Nadikan'i David Sasaki avy amin'ny fiteny Espaniola .